ILinus Torvalds igxeka iPargon Software futhi enqubeni yeGitHub idala ukuhlangana okungadingekile | Kusuka kuLinux
Okuhle | 08/09/2021 11:54 | Kubuyekezwe ku- 09/09/2021 01:54 | Izaziso
ILinus Torvalds ibilindile isikhathi eside uku I-Paragon Software ithumele umshayeli wayo I-NTFS ukuyifaka ku-kernel ye-Linux futhi lokhu sekuvele kwenziwe futhi iTorvalds ekugcineni ihlanganise umshayeli omusha nomthombo we-Linux 5.15 kernel.
Kepha ngaphambi kwalokho wakhononda ngokusebenzisa isici sesicelo sokuhlanganisa seGitHub eposini, ethi iGitHub "idala ukuhlangana okungadingekile." Ngokusobala umakhi weKernel kernel akathandi ukuhlangana kweGitHub, uma bethanda. Futhi, izixwayiso zomhlanganisi manje seziphathwa njengamaphutha okuzenzakalelayo ekwakhiweni kernel.
Ekuqaleni kuka-Agasti, UTorvalds unikeze iPargon Software isunduza lokwenza isicelo sokudonsa»Ukuthunyelwa kwangempela kwekhodi okuzohlanganiswa nemithombo ye-kernel, ukuze umshayeli wayo wokufunda / ukubhala we-NTFS afakwe enguqulweni elandelayo engu-5.15, lapho iwindi lokuhlanganisa livuliwe khona manje.
IParagon ithumele ngokufanele "isicelo sayo sokuhoxa", ithi:
"Inguqulo yamanje isebenza ngamafayela ajwayelekile / acindezelwe / ama-spars futhi isekela ukudlala kwe-acl ne-NTFS." Lokho kusho ukuthi, inkampani isaqhubeka nokujwayela inqubo yokuhambisa, futhi uTorvalds ube nezimvo ezimbalwa azenzile, ngenhloso yokwenza ngcono izicelo zokudonsa ezizayo. Okokuqala, umakhi weLinux kernel uthe isicelo sokudonsa bekufanele sisayinwe. "Emhlabeni ophelele, lokho kungaba yisiginesha ye-PGP engingakutshela yona ngqo ngokusebenzisa i-chain of trust, kodwa angikaze ngiyifune ngempela," esho.
Khona-ke uqaphele ukuthi ikhodi esicelweni sokudonsa ifaka phakathi ukuhlanganisa okwenziwe nge-GitHub web UI.
"Kungezinye zezinto engingafuni ukuzibona: IGitHub idala ukuhlangana okungadingekile futhi akufanele usebenzise izixhumi zeGitHub ukuhlanganisa noma yini." Ukuhlanganiswa akuyona enye yalezo zinto. Esikhathini esedlule, ikakhulukazi ngo-2012, uTorvalds wayekhalaze ngezici ezithile zeGitHub.
“Angizenzi izicelo zokudonsa zeGitHub. IGitHub ilahla lonke ulwazi olufanele, olufana nokuba nekheli le-imeyili elivumelekile lomuntu owenza isicelo sokudonsa. I-diffstate nayo ayitholakali futhi ayinasidingo, ”kusho yena ngaleso sikhathi. Qaphela ukuthi umyalo wokucela ukudonsa we-git uhlukile emsebenzini wesicelo sokudonsa kusuka eGitHub. Futhi, indawo yokugcina iParagon inemiyalezo yokuzibophezela entula imininingwane, efana nokuthi »Hlanganisa i-torvalds yegatsha: master 'ku-master«. Ekhuluma ngalokhu, uTorvalds uthe ngoMgqibelo "ukuhlanganiswa kwe-Linux kernel kumele kwenziwe * kwesokudla *."
Ngaphandle kokungeza isilawuli I-Paragon NTFS ku-Linux kernel 5.15, I-Torvalds iphinde inike amandla inketho yokwakha "-Werror", okungokuzenzakalelayo kwayo yonke i-kernel eyakhayo.
Ifulegi lokuhlanganiswa »-Werror«phatha zonke izixwayiso njengamaphutha wokuhlanganisa. Ngokuphakamisa zonke izixwayiso njengeziphambeko, abakwaTorvalds baphoqelela onjiniyela ukuthi baqinisekise ukuthi izexwayiso zokwakha ezingase zingaqapheleki noma zithinteke kalula ngabathuthukisi manje sezibekwa eqhulwini njengoba ziphazamisa inqubo yokwakha.
UTorvalds uphawule mayelana noshintsho ukuthi kufanele ngaso sonke isikhathi sibe nokwakha okuhlanzekile futhi sizokhubaza izexwayiso ezithile ezishisayo uma kunesidingo, uma singakwazi ukuzilungisa. Kepha ngenkathi ngiphoqelela lokhu ngokwenkolo yami esihlahleni sami, amarobhothi ahlukahlukene wokwakha angabiki nezezexwayiso awenzi.
Qiniseka ukuthi izexwayiso ziyasingathwa, kepha iningi lalawa maphrojekthi awulona usayizi we-Linux kernel. Ngakolunye uhlangothi, WERROR njengokushintsha kwe-Kconfig. Lokhu kuzocisha ifulegi le-»-Werror» uma izinhlobo ezintsha zomhlanganisi zifaka izexwayiso ezintsha ukuthi i-kernel ayikwazi ukulungisa ngokushesha noma ezinye izinkinga zokukhetha okungeke kwenzeke ukuthi zenze i-kernel ngaphandle kwezixwayiso. Inketho yeWERROR inikwa amandla ngokuzenzakalela kukho konke ukwakhiwa kwe-kernel.
ULinus awuqede umlayezo kwesiqephu nge:
"Sethemba ukuthi lokhu kuzosho ukuthi ngizothola izicelo ezimbalwa zokudonsa eziqukethe izexwayiso ezintsha ezinganakiwe yimishini ehlukahlukene esiyisebenzisile." Ungqongqoze ngokhuni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » ILinus Torvalds igxeka iPargon Software futhi enqubeni yeGitHub idala ukuhlangana okungadingekile